एकै देशमा दुई राष्ट्रपति, दुई सरकार ! | Pennepal
Home अन्तराष्ट्रिय एकै देशमा दुई राष्ट्रपति, दुई सरकार !
एजेन्सी । राजनीतिमा कहिलेकाँही यस्तो पनि देख्न पाइदो रहेछ जस्तो अफगानिस्तानमा भयो । सोमबारको दिन अफगानिस्तानका लागि धेरै खराव रह्यो । निर्वाचित सरकारका प्रमुखको रूपमा अशरफ गनीले राष्ट्रपति पदको सपथ लिए भने उनका प्रतिद्वन्दी अब्दुल्ला अब्दुल्लाले पनि समानान्तर सरकार गठन गरे ।
गनीले सपथ लिइरहँदा नजिकै दुई ठूला विस्फोट भए, तर यसबाट कुनै नोक्सानी नभएको बताइएको छ । विस्फोटकाबीच आफ्नो मन्तब्य जारी राख्दै गनीले यदी आफ्नो बलिदानले अफगानिस्तानमा शान्ति आउँछ भने त्यसका लागि आफू सधैं तयार रहेको बताए ।
एउटा देशमा दुई सरकार भएकाले जारी शान्ति वार्तामा बाधा पुग्ने तालिवानले आशंका व्यक्त गरेको छ । गनी अफगानिस्तानको परम्परागत पोशाक ‘पगरी’ बाँधेर सपथ लिन समारोहस्थल पुगेका थिए । राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा उनका सयौं समर्थक, सरकारी अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तिहरू, विदेशी कूटनीतिज्ञ र अमेरिकाका विशेष दूत जल्मे खलिलजाद उपस्थित थिए ।
सपथ सूरु हुनासाथ भएको विस्फोटको आवाज सुनेर समारोहमा भागदौडको स्थिति आएको थियो । यसबीच गनीले माइक समातेर भने ‘बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएको छैन, मात्र एउटा पातलो सर्टमा छु । तर, यहाँबाट एक इन्च हटदिन, आवश्यकता परे टाउको कटाउछु ।’ गनीको हौसला देखेर मानिसहरू रोकिए र केही फर्किएर आफ्नो कुर्सीमा बस्न थाले ।
यसको केही मिनेटअघि राष्ट्रपति भवनको अर्को भागमा सुटमा सजिएर अब्दुल्ला अब्दुल्लाले राष्ट्रपति पदको सपथ लिएका थिए । उनले स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रको संप्रभुता र क्षेत्रिय अखण्डताप्रति प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
यसअघि अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अन्त्यसम्म समानान्तर सरकारको गठन रोक्न प्रयासरत् थिए । अमेरिकाले त तालिवानसंग भएको सम्झौता भंग गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो, तर कुरा मिलेन । देशका नेतृत्वकर्ताहरूबीचको बिबादको फाइदा तालिवानले उठाउने कुरामा आशंका गरिएको छ, या उसको एउटा कट्टरपन्थी हिस्साले सत्ताको साझेदारी वा त्यस्तै ठूलो फाइदा लिन सक्छ । नागरिकहरू यतिखेर आफ्नो निजी स्वार्थ हेर्नैभन्दा राष्ट्र हित हेर्ने समय भएको बताउँछन् ।
आज (मंगलबार,२७ फागुन) कुन राशीको कस्तो भाग्य